धर्म संस्कृती Archives - Page 94 of 108 - Purbeli News
वास्तुशास्त्र अनुसार कुन दिशा तर्फ फर्किएर खाना पकाउन शुभ मानिन्छ
बस्तुशास्त्रमा घरको सब भन्दा मुख्य भाग भान्छाघरलाई मानिन्छ। घरमा हुने बिमारी र समस्याका कारण किचेनसंग जोडिएको वास्तुदोष हुन् सक्छ। तपाई कुन दिशामा फर्किएर खाना बनाउनुहुन्छ र कता फर्केर खानु हुन्छ भन्ने कुरामा निर्भर रहन्छ। यदि वास्तुशास्त्रसंग जोडिएको यी कुरालाई ध्यान दिएमा वास्तुदोषबाट छुटकारा पाउन सकिन्छ। १, उत्तर दिशा तर्फ फर्किएर खाना पकाउना...
काठमाडौँ / भगवान् बुद्धको अत्यन्त महत्वपूर्ण वचन ‘प्रज्ञापारमिता सुत्र’ लाई पहिलोपटक नेपालीमा अनुवाद गरिने भएको छ । बुद्धवचन अनुवाद समिति नेपालले सर्वसाधारण नेपाली बौद्ध धर्मावलम्बीको अध्ययन सहजताका लागि भोट भाषामा लिपिबद्ध गरिएको ‘प्रज्ञापारमिता सुत्र’ लाई नेपाली भाषामा ल्याउन लागिएको हो । यही कात्तिम २४ गतेदेखि शुरु गरिने अनुवाद करिब तीन व...
बुढी औलाले बताउछ तपाईको स्वभाव कस्तो छ ? शास्त्रले यसो भन्छ..
यदि हामी ज्योतिष शास्त्रलाई मान्ने हो भने हाम्रो शरिरको विभिन्न अंगहरुले तपाईको सोच तथा बानिहरु थाहा पाउन सकिन्छ । त्यस्तै हत्केलामा भएका बिभिन्न रेखाहरुले पनि व्यक्तिको बारेमा बताइरहेको हुन्छ । यस्तै कुरालाई बिश्वास गर्ने व्यक्तिहरु विभिन्न ठाउँमा हेराउन गइरहेको देख्न पाउँछौ । कसैले यस्ताकुराहरुलाई वाइयात हो भनेपनि बिश्वमा विकशित मुलुकहरुमा प...
यस्ताे हुनेछ शनिबार जन्मेका मानिसको भविष्य र आचरण
शनिबार जन्मेका मानिसको भविष्य र आचरण । ज्योतिष शास्त्र भनेको सौर्यमण्डलमा रहेका ताराहरू र ग्रहहरूको आपसी सम्बन्धबाट प्राप्त हुने किरण अथवा तरंगलाई सुक्ष्म गणितीय सूत्रबाट अध्ययन गरेर त्यसको यस पृथ्वीमा विद्यमान जड र चेतनमाथि पर्ने प्रभावको अध्ययन र विश्लेषण गर्ने अद्वितीय विज्ञान हो। जन्मेको समय र उसको वातावरणले उसको भविष्य निर्धारण गर्ने गर्दछ...
अैठन भएर हैरान हुनुहुन्छ ? शास्त्र भन्छ सिरानीमुनि राख्नुहोस यी ५ चिज
के तपार्इलार्इ राती सुत्दा नराम्रो सपना अथवा अैठन हुने गर्छ ? कसैलाई त दैनिक त्यस्तै समस्याले सताउने गर्छ। यस्तो समस्याबाट छुटकारा पाउनको लागि शास्त्र अनुसार यसो गर्नुहोस्। १, सुकमेल : यदि रातको समयमा तपाईलाई डरलाग्दो सपनाले सताईरहेको छ भने ५/६ वटा सुकमेल कपडामा बेरेर आफ्नो सिरानीको नजिक राख्नु पर्छ। २, पानीले भरेको तामाको भाडा : निद्रामा डर ...
पाल्पा / तिनाउ गाउँपालिका–४, सत्यवतीमा चिच्याएर बर माग्ने धार्मिक मेला शुरु भएको छ । रातको समय चिच्याएर बर माग्दा पूरा हुने विश्वासका साथ अहिले मन्दिर क्षेत्रमा बर माग्नेको चहलपहल बढेको छ । सत्यवतीताल संरक्षण तथा मन्दिर विकास समितिको आयोजनामा शुरु भएको सत्यवती धार्मिक मेलामा रातीको समयमा चिच्याएर बर माग्नेको अहिले भीड लागेको छ । धार्मिक, सामाजिक...
तपाईं कुनै व्यापार व्यवासाय संचालन गर्ने साेच बनाउनुभएकाे छ ? कस्ताे व्यपार व्यवसाय गर्ने वा करिअर बनाउने भन्ने अलमलमा पो हुनुहुन्छ कि ? ज्योतिष विज्ञानका अनुसार करिअर, पढाई तथा व्यापार व्यवसायको सफलताका लागि राशिको निकै महत्वपूर्ण भूमिका हुन्छ । यदि राशिलाई ध्यानमा राखेर पढाई, करिअर तथा व्यवसाय सुरु गर्ने हो भने सफल हुने संभावना बढी हुन्छ । ...
पंचतन्त्रको मित्रलाभ ग्रन्थमा दानलाइ एकदम महत्वपूर्ण मानिन्छ। यदि कोहि दान गर्न सक्षम छन् भने उसले दान गर्नु पर्छ। आउनुहोस जानी राखौ यी चार व्यक्तिलाई कहिले आफ्नो घरबाट खाली हात फर्किन नदिनुहोस। १. घरमा आउने जुनसुकै भिखारीलाई खाली हात जान नदिनुहोस्।गरिब, दुखिको सेवा नै नारायणको सेवा गर्नु हो त्यसैले गरिबहरुलाई दरिद्र नारायण भन्ने गरिन्छ। २. क...